बेलायतबाट ५ गते नेपाल आएकी कोरोना सङ्क्रमितमा लगातार तेस्रो रिपोर्ट पनि पोजेटिभ । – Namaste Dainik
बेलायतबाट ५ गते नेपाल आएकी कोरोना सङ्क्रमितमा लगातार तेस्रो रिपोर्ट पनि पोजेटिभ ।
April 29, 2020 NamastedainikLeaveaComment on बेलायतबाट ५ गते नेपाल आएकी कोरोना सङ्क्रमितमा लगातार तेस्रो रिपोर्ट पनि पोजेटिभ ।
भरतपुर, बैशाख १७ -चितवनकी कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित एक महिलाको तेस्रो पटक गरिएको पुनः कोरोना परीक्षण नतिजा पनि पोजिटिभ नै आएको छ । वैशाख १५ गते स्वाब सङ्कलन गरी पुनः परीक्षण गर्दा ६३ वर्षीया महिलाको नतिजा पुनः पोजेटिभ नै आएको हो ।
ती महिला हाल भरतपुर अस्पतालको आइसोलेसनकक्षमा उपचाररत हुनुहुन्छ । उनिमा वैशाख ५ गते कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । उनका २७ वर्षीय छोरा भने निको भइसक्नुभएको छ । आमाछोरा दुवैको कोरोना सङ्क्रमणसँगै पुष्टि भएको थियो ।
उनिहरु चैत ३ गते बेलायतबाट नेपाल आएर काठमाडौँबाट ५ गते चितवन आएकी थिइन । राप्ती नगरपालिका–८ निवासी दुई जनाकै कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ गरी अन्यको कोरोना परीक्षण गरिएको थियो तर, कसैमा पनि कोरोना सङ्क्रमण देखिएन ।
यस्तै वैशाख १५ गते नै गरिएको अन्य २२ परीक्षणको नतिजा भने नेगेटिभ आएको भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलले जानकारी दिए ।
इरफान खानको निधले अमिताब बच्चन दुखी, भने बलिउडकै एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता भगवानको प्यारो भए ।
बिक्रमको अबस्था झन् गम्भीर भएपछि नायिका एलिजा पुगिन सहयोग लिएर,गाउँलेले पैसा फिर्ता मागेपछि रुवाबासी
तपाईंको इन्टरनेटको स्पिड कम छ ? यस्तो हुन सक्छ कारण ….
भारतलाई नेपालको जवाफ : कालापानी हाम्रो भूभाग हो, हाम्रा जनता त्यहाँ जान्छन् आपत्ति जनाउनुपर्ने छैन ।